कटुवा पेस्तोलसहित २७ वर्षिय यादव पक्राउ, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कटुवा पेस्तोलसहित २७ वर्षिय यादव पक्राउ
लहान । कटुवा पेस्तोलसहित प्रहरीले आईतबार साँझ सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–११ निवासी काशीन्द्र यादवलाई पक्राउ गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, मिर्चैयाबाट खटिएको गस्ती टोलीले एक थान कटुवा पेस्तोलसहित २७ वर्षीय यादवलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी टोलीलाई देखेर जंगलतिर भागेकाले शंका लागेर तलासी गर्दा यादव भन्दा केहीपर एक थान कटुवा पेस्तोल फेला परेकाले यादवलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।रासस